Who were Bengali, so called Rohingya?: """လန်ဒန်မြို့ BBC ရုံးရှေ့၁၆. ၁၁.၂၀၁၁တွင် ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း""
"""လန်ဒန်မြို့ BBC ရုံးရှေ့၁၆. ၁၁.၂၀၁၁တွင် ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း""
ယနေ့လန်ဒန်မြို့ ယနေ့နံနက်BBC ရုံးရှေ့တွင်BBC၏မြန်မာပြည်မြေပုံတွင်ရိုဟင်ဂျာဟုလိမ်လည်ထဲ့သွင်းဖော်ပြမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ရှူတ်ချကြောင်း အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိသောရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဦးဆောင်၍တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစုပေါင်း
အင်အားသုံးဆယ် ( ၃၀ ) ကျော်သွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။၄င်းတို့တောင်းဆိုတာကတော့
"""1, ( Burma ) ( Burma )---- ( Not for Sale )( Not for Sale ).2, ( Arakan State ) ( Arakan State ) ---( Not for Sale ) ( Not for Sale ) 3,( Anna Jones )---- ( Out ) ( Out ) 4, ( Anna Jone stop giving wrong information about Rohingya ) ---- ( Now ) ( Now ) 5, BBC stop giving wrong information about Rohingya ) ---- ( Now ) ( Now ) 6, ( Anna Jones stop creating conflict in Burma ) ----- ( Now ) ( Now ) 7, BBC stop creating conflict in Burma ) ----- ( Now ) ( Now ) """ တို့ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 9:32 AM
ဘင်္ဂလားကခိုးဝင်လာတဲ့ခေါ်တောဆိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံပေါ့ ခုတော့အာရပ်ကလာတယ်လေး ဘာလေးနဲ့ ခွေးမျိုးခေါ်တောတွေ ခွေမျိုးတောင် မင်းတို့လူမျိုးထက်ပိုအဆင့်မြင့်သေးတယ် မင်းတို့ဆောက်ခွက်တွေမှန်မှာတချက်ပြန်ကြည့်ဦး ခွေးရုပ်ကမှမင်းတို့ရုပ်ထက်ပိုသားနားသေးတယ် ပြောတဲ့စကားကလည်းအာကြမ်းလျှာကြမ်းနဲ့ ခွေးဟောင်သံကမှပိုနားဝင်ချိုသေးတယ်။ ရှက်တတ်ရင် မြန်မာပြည်ကထွက်သွားကြ တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ခေါ်တောတွေအားလုံးကိုဖမ်းပြီး ပင်လယ်ထဲငါးမန်းစာ ကျွေးရမယ်
thihatun zaw said...
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ခေါ်တောခွေးမျိုး၊အမွှေးထူလဗြစ်နဲ့ခွေးမျိုးဖြစ်မယ် ဒါကြောင့်ခွေးလီးကို ခေါင်းမှာ
နောက်ဆို မင်းတိုကိုမြန်မာပြည်မှာ အရုပ်ဆွဲပြ
ဟားဟား ခွေးမျိုးကိုစောင့်တဲ့ ကောင်၊ ခွေးလီးကိုခေါင်းမှာဆောင်းတယ် ပြောတာတည့်တည့်မှန်သွားလို့ ရမ်းတာလား မင်းတို့ ဖာကုလားမတွေ
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတယ်။မှတ်ထား မင်းတို့ ဘင်္ဂါ
လီသမိုင်းကို သိရုံတင်မကဘူး မင်းတို့ရဲ့ ကိုယ့်